I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Los Palos Grandes
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Liza
Ifulethi elikhulu, elinethezekile, eligcwele ukukhanya elisendaweni engcono nephephe kakhulu eCaracas. Ibhulokhi elilodwa kude nomgwaqo ongaphansi kanye nezinyathelo nje ukusuka ezindaweni zokudlela, amapaki, izitolo ezinkulu, amabhizinisi, amabhikawozi, izinsiza nezitolo zegrosa. I-Los Palos Grandes iyindawo enokuthula, yomndeni lapho kukhona khona amaphoyisa avikelekile futhi ahlala njalo futhi imigwaqo inombono we-panoramic wentaba engumfanekiso weCaracas; I-Avila.
Ifulethi lisanda kulungiswa kabusha ngesitayela somqondo ovulekile. Igumbi lokuphumula, igumbi lokudlela nekhishi kuvulekele ukuze kube lula. Uzothola ikhishi nezindlu zokugezela ezisanda kulungiswa, amanzi ashisayo, iwasha nesomisi kanye nazo zonke izinto ezidingekayo ukuze uhlale uvumelana futhi ukhululekile. Kukhona nethangi lamanzi eligcinelwe amalitha angama-500 kanye nephampu ukuqinisekisa ukuthi uzohlala uthola amanzi ngesikhathi sokuhlala kwakho (imfuneko eVenezuela, lapho amanzi evame ukuhlukaniswa khona).
4.95 ·56 okushiwo abanye
Ebhulokhini elilandelayo uzothola i-La Estancia, indawo eshisayo yasemadolobheni enhle esendaweni yekhofi yakudala, iyindawo efanelekile yepikiniki noma uhambo lokungcebeleka. Amabhulokhi amabili ukusuka lapho, uzothola elinye lamapaki amahle kakhulu edolobheni; I-Parque del Este, eyaziwa nangokuthi i-Parque Miranda, inemizila eminingi yokugijima, amachibi, izindawo zengadi, ne-zoo, kanye nokubukwa okumangalisayo kwezinyoni eziningi zendawo, hhayi zendawo, eziye zayenza iCaracas ikhaya lazo emashumini eminyaka adlule. . Yindawo enhle kakhulu yokuzivocavoca, ukuxoxa nemvelo futhi ubuke amanye ama-Macaw amahle kakhulu futhi ahlelekile emhlabeni, endiza mahhala, amaningi awo avame ukutholakala kuphela emahlathini ase-Amazon eNingizimu ye-Brazil.
Sisenkonzweni yakho ukuze sinakekele noma yisiphi isidingo esiziveza ngesikhathi uhlala futhi singakujabulela ukukuqondisa mayelana nokuphila kwansuku zonke eCaracas kanye nolwazi lwezokuvakasha mayelana neVenezuela. Sikhuluma isiNgisi nesiFulentshi.
Sisenkonzweni yakho ukuze sinakekele noma yisiphi isidingo esiziveza ngesikhathi uhlala futhi singakujabulela ukukuqondisa mayelana nokuphila kwansuku zonke eCaracas kanye nolwazi…
ULiza Ungumbungazi ovelele